“Maxaad u amaantay Messi” Saxiixa cusub ee Real Eden Hazard oo qatar ugu jira inuu soo dhaweyn qurux badan ka heli waayo jamaahiita Los Blancos. – Gool FM
“Maxaad u amaantay Messi” Saxiixa cusub ee Real Eden Hazard oo qatar ugu jira inuu soo dhaweyn qurux badan ka heli waayo jamaahiita Los Blancos.
(Madrid) 09 June 2019. Saxiixa Eden Hazard ayaa la fahamsan yahay inuu farxad galiyay jamaahiirta kooxda ugu guulaha badan qaaradda yurub, balse waxaa laga cabsi qabaa inuu soo dhaweyn qurux badan heli waayo maadaama uu horay amaan ballaaran ugu soo jeediyay Lionel Messi.
Hazard wuxuu hadda ka mid yahay xiddigaha Real Madrid, inkastoo warbaahinta caalamka ay isku qilaafsan tahay qiimahiisa hadana shabakadda Marca waxey leedahay 130 Malyan oo Yuuro ayuu ku wareegay marka lagu daro gunnooyinka labada dhinac ay ku heshiiyeen.
Xiddiga reer Belgium waligiis ayuu ku riyoon jiray inuu usoo wareego Bernabeu, balse jamaahiirta kooxda cad-cadka kuma faraxsana qaarkood wixii uu ka sheegay Messi markii uu joogay kooxda Blues.
Xifaaltanka u dhaxeeya kooxaha Madrid & Barcelona waa mid ka mid ah kuwa ugu miisaanka culus, jamaahiirta Los Blancos ayaan sinaba u jecleen xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or si walba oo ay adduunyad kale u aaminsan tahay.
Hazard wuxuu Messi ugu yeeray xiddiga ugu wanaagsan dunida, sidoo kalana wuxuu qiray inuusan naftiisa marnaba la barbardhigi karin xiddiga reer Argentina.
“Islama barbardhigi karo Messi, Haa, waxaa jira waxyaabo yaryar oo aan iska shabahno, waan gaabanahay, orod badanahay, balse wuxuu dhaliyaa goolal muhiim ah kulan walba, ma doonaayo inaan isla barabrdhigo kuwa aan la isla barbardhigi karin” ayuu yiri Eden Hazard.
Isagoo hadalkiisa sii wata lana hadlaya Tv-ga Chelsea wuxuu yiri: “Marka aad ciyaareyso kubadda cagta waxaa u baahan tahay inaad la ciyaarto kuwa ugu wanaagsan dunida iyo kooxda ugu wanaagsan, Messi waa kan ugu fiican dunida kubadda cagta”
Shaki kuma jiro in la cafin doono, si kastaba hadii Eden Hazard uu kusoo bandhigo maaliyadda Madrid bandhiggii joogtada ahaa uu ku muujiyay kooxda Chelsea.
Cristiano Ronaldo oo ficil yar mar kale ku kasbaday qalbiyada dadka ka hor final-ka UEFA Nations League - Muxuu Sameeyay?
"Hammigooda ugu weyn wuxuu ahaa iney sawir la galaan Lionel Messi" Ciyaartoy qaran oo la eedeeyay.